दरवन्दी छ , स्वास्थ्यकर्मी छैनन् ! विद्यार्थीको भरमा स्वास्थ्य चौकी सञ्चालन « aamsanchar.com , aamsanchar
दरवन्दी छ , स्वास्थ्यकर्मी छैनन् ! विद्यार्थीको भरमा स्वास्थ्य चौकी सञ्चालन
इलाका स्वास्थ्य चौकी राजगढमा हेल्थ असिस्टेण्ड (पाँचौ)सहित ८ जनाको दरवन्दी छ । वर्थिङ सेन्टरसमेत सञ्चालनमा रहेको सो स्वास्थ्य चौकमा दरवन्दी भएपनि विद्यार्थीले विरामीको स्वास्थ्य परीक्षण गर्छन भन्दा अपत्यारिलो लाग्न सक्छ । तर, स्वास्थ्य चौकी राजगढको वास्तविकता यही हो ।
दरवन्दीमा रहेका चिकित्सकले काम नगर्दा सो स्वास्थ्य चौकीमा लाइफलाइन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दमकमा अध्ययनरत विद्यार्थीले सेवाग्राहीको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दै आएका छन् । प्रतिष्ठानले क्लिनिकल र कम्युनिटी पोस्टिङका लागि विद्यार्थी राजगढ स्वास्थ्य चौकी पठाएपछि ओजेटी(अन द जव टे«निङ)मा आएका विद्यार्थीले अहिले नियमित विरामीको स्वास्थ्य जाँच गर्दै आएका छन् ।
स्वास्थ्य चौकीमा हेल्थ असिस्टेण्ड खेमराज साह(पाँचौ), सिनियर अहेव रामकुमार साह(छैठौं) , नरेन्द्र प्रसाद मण्डल (चौथो) को दरवन्दी छ । तर, दरवन्दीमा रहेका चिकित्सक मध्ये साह जिल्ला समन्वय समितिको निर्णयबाट वाह्रदशी गाउँपालिकामा काजमा कार्यरत छन् ।
वुधवार दिउसो १ वजे संचारकर्मी स्वास्थ्य चौकी पुग्दा स्वास्थ्य चौकीमा न थिए हेल्थ असिस्टेण्ड, न थिए अहेव नै । उनीहरु मात्र होइन स्वास्थ्य चौकीमा दरवन्दीमा रहेका तीन जना नै अनमीपनि अनुपस्थित थिए । त्यस्तै स्वास्थ्य चौकीका खरिदार पवनकुमार पोखरेल र कार्यालय सहयोगी कुलप्रसाद सापकोटा पनि स्वास्थ्य चौकीमा थिएनन् । स्वास्थ्य चौकी थिए त विद्यार्थी मात्रै । उनीहरु विरामीको स्वास्थ्य परीक्षणमा व्यस्त थिए । त्यस्तै स्वास्थ्य चौकीमा गाउँपालिकाको निर्णयबाट हालै नियुत्त भएकी अनमी मञ्जु तामाङ र राष्ट्रिय योजना आयोगबाट करारमा खटिएकी अनमी मनिषा आङ्वो मात्र थिए ।
स्वास्थ्थ चौकी प्रमुख खेमराज क्षयरोगको तालिम समिक्षा गोष्ठीमा सहभागी हुन भन्दै विदामा छन् । उनले २०७४ चैत २५ गतेदेखि कति दिनका लागि विदा हो त्यसको मिति नै नखुलाई भ्रमण आदेश फारम भरेका छन् । विदा वस्ता कहिलेदेखि कहिलेसम्म कति दिन विदा वस्नु पर्ने हो सो उल्लेख गर्नु पर्ने हुन्छ । तर, उनले भ्रमण आदेश फारममा विदा बस्ने दिन र मिति खुलाएका छैनन् ।
यता स्वास्थ्य चौकीका अर्का अहेव मण्डल चैत १२ गतेदेखि स्वास्थ्य चौकीलाई जानकारी नै नगराई विदा बसेका छन् । लामो समयसम्म विदा वसेपछि गाउँपालिकाले उनलाई लिखित स्पष्टीकरण सोधेको श्रोतले जनाएको छ ।
स्वास्थ्य चौकीमा दरवन्दीमा रहेका पवित्रादेवी संग्रौला(अनमी पाँचौं) काजमा छिन् । सर्मिला घिमिरे पनि काजमा रहेको र डम्वरमाया वास्कोटा स्थास्थ्य चौकीमा अनुपस्थित भएपछि स्वास्थ्य चौकी राजगढ पुगेका विरामी विद्यार्थीलाई स्वास्थ्य जाँच गराउन बाध्य छन् ।
अधिकार कट्यो – कोइराला
संचारकर्मी स्वास्थ्य चौकी पुग्दा विद्यार्थीले विरामीको स्वास्थ्य जाँच गरिरहेको र दरवन्दीमा रहेका एकजना पनि स्वास्थ्यकर्मी नभएपछि जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय झापाका प्रमुख मधुसुधन कोइरालालाई जानकारी गराएको थियो ।
तर, जनस्वास्थ्य प्रमुख मधुसुधन कोइरालाले आफूहरुको अधिकार कटौटी भएको र सवै अधिकार स्थानीय तहलाई गएको बताएका छन् । उनले स्वास्थ्यका समस्या आफूलाई नभई स्थानीय तहलाई सोध्न आग्रह गरे । उनले भने– आफ्नै टुङ्गो छैन कहाँजाने हो, अब सबै अधिकार स्थानीय तहलाई भएकाले उतै भन्नुहोस् ।
स्पस्टीकरण सोध्छु – अध्यक्ष
कार्यालय समय अवधिमा स्वास्थ्य चौकीमा एक जनापनि स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारी नभएको जानकारी गराउनसाथ वाह्रदशी गाउँपालिका वडा नम्वर २ का अध्यक्ष यादव मिश्र स्वास्थ्य चौकी पुगेका थिए ।
उनी स्वास्थ्य चौकी पुगे लगत्तै खरिदार पवनकुमार पोख्रेल स्वास्थ्य चौकी आएका थिए । स्वास्थ्य चौकीलाई सनराइज वैंकले आयोजना गरेको कार्यक्रममा निमन्त्रण गरेकाले आफू वैंकको कार्यक्रममा सहभागी हुन गएको पोख्रेलले बताए ।
स्वास्थ्य चौकीमा एक जनापनि स्वास्थ्यकर्मी नभएपछि उनले सञ्चारकर्मी र सेवाग्राहीसंग सवै स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीलाई तत्काल स्पष्टीकरण सोध्ने बताए । स्वास्थ्य चौकीमा स्वास्थ्यकर्मी नुहुँदा सेवाग्राहीमा पर्न गएको असुविधाप्रति म क्षमाप्रार्थी छु अध्यक्ष मिश्रले भने – आगामी दिनमा स्वास्थ्य सेवामा म कुनै कमी आउन दिन्न ।